Akụkọ - Kedu otu esi ahọrọ oke dayameta nke waya ọkụkọ?
Waya ọkụkọ nwere nlele dị iche iche.Guage pụtara ọkpụrụkpụ waya ọ bụghị nha oghere.Na ala nlele ahụ, waya ahụ na-abawanye ụba.Dịka ọmụmaatụ, waya nlele 19, waya nwere ike ịdị ihe dịka 1mm n'obosara.N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịhụ waya nlele 22, nke nwere ike ịdị ihe dịka 0.7mm.
Ogo ntupu nke ụgbụ waya hexagonal pụtara nha oghere sitere na nnukwu nnukwu na 22mm ruo obere na 5mm.Biko họrọ nha dabere na anụmanụ ịchọrọ idobe ma ọ bụ pụọ na mpaghara.Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ idebe oke na òké ndị ọzọ n'ime ọkụkọ na-agba ọsọ, ị ga-ahọrọ ihe dịka 5mm.
Waya ọkụkọ na-abịakwa n'ogo dịgasị iche iche, anyị na-akpọkarị obosara nke a.Ogologo a chọrọ na-adabere na nha anụmanụ .Ọ bụrụ na ịchọrọ iji obosara 0.9m, ma ị nwere ike ịchọta eriri waya hexagonal dị ka 1m. Na ị nwere ike belata ruo n'obosara achọrọ.
Anyị bụ ndị ọkachamara na waya ọkụkọ, ma ọ bụrụ na ịmaghị ka esi ahọrọ ntupu waya hexagonal maka mkpa gị.biko juo anyi ndụmọdụ.
Oge nzipu: Jul-30-2021